Degmada Erar Iyo Abaabulkii Waxbarashada - Cakaara News
Degmada Erar Iyo Abaabulkii Waxbarashada
Erar (cakaaranews)Khamiis 22ka September 2016. Shirar kaladuwan oo ujeedadoodu tahay abaabulka waxbarashada ayaa si heer sare ah uga qabsoomay qabaleeyada hoosyimaada degmada Erar ee Gobalka Siti.
Hadaba, Gudoomiye Kuxigeenka Degmada Erar mudane Saacid Badal Khalaf oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in si heer sare ah ay ugu socdaan shirar kusaabsan wacyigalinta iyo abaabulka waxbarashada si waalidiinta caruurtu ay ugu wada dhiiradaan in caruurta da’doodu gaadhay lageeyo dugsiyada waxbarshada. Wuxuuna xusay in kooxda wada abaabulka ee kasocota xafiiska waxbarashada DDSI ay yihiin koox ay ka go’antahay shaqadan ay wadaan islamarkaana ay ilaa iyo hada ay ka sameeyeen shirar abaabul ah tuulooyinka hoosyimaada degmada Erar.
Sidookale, Hogaamiyaha Kooxda isku dhafka ah mudane Cabdiwali Axmed Yaasiin oo ay waheliyaan Nuur Cabdi haajir, saadiq Cabdi Geedi iyo marwo Ayaan ayaa dhankooda sheegay inay hawlihii abaabulka ee waxbarashadu ay si habsami leh ugu socoto islamarkaana ay wakhti xaadirkan kujiraan shirarkii abaabulka ee degmada erar. Waxayna intaa kudareen in ay shirar balaadhan ka qabteen tuulooyinka hoosyimaada degmada Erar ee kala ah Biila, Qandaraas, Asbuli, iyo aydooraa.
Ugudanbayna Waxay tilmaameen in ay kusii socdaan tuulooyin kale. Iyagoo carbka kudhuftay in maamulka iyo madax xafiiska waxbarashada degmada erar ay si heer sare ah ulawadaan shaqooyinkan abaabulka waxbarashada,